Ampio media amin'ny tranokalanao mora foana amin'ny Wimpy Player | Martech Zone
Alahady, Aogositra 5, 2007 Alahady, Aogositra 5, 2007 Douglas Karr
Roa taona lasa izay, nitady mpilalao MP3 Flash tsara aho mba hahafahan'ny zanako manampy manampy azy mozika ho an'ny bilaoginy mora foana. Mahafinaritra ny mampiditra ireo mpilalao Flash satria afaka mandefa ny mozika izy ireo fa tsy mampiditra ny mpampiasa azy indray mandeha. Rehefa avy nitady sy nitady aho dia sendra ilay izy mpilalao Wimpy.
Tamin'ity faran'ny herinandro ity, tafatafa iray nataoko ho an'ny NPR amin'ny fampiasana loharanon-karena an-tserasera ny fanatsarana ny tambiny dia napetraka an-tserasera. Tena tsara ilay toerana ka tiako ny nandefa azy tamin'ny fitaovana web namboariko, Calculator fandoavana.
Wimpy dia manana mpilalao maromaro, bokotra tsotra, mpilalao audio, ary mpilalao video. Angamba ny endrika tsara indrindra amin'izy telo ireo dia ny takatry ny saina sy ny azo ovaina tanteraka. I namolavola ny mpilalao teo amin'ny tranokalan'ny zanako lahy afaka 30 minitra eo ho eo.
Nanamboatra a mpilalao ho an'i Jones Soda izay nasongadin'izy ireo tao amin'ny tranonkalany tamin'ny taon-dasa. Omaly, nanamboatra mpilalao bokotra tsotra aho Calculator fandoavana afaka folo minitra eo ho eo.
Audio dia fitaovana mahafinaritra ho an'ny tranonkala. Tsy mino aho fa tokony hampiasaina be loatra na hanomboka ho azy (Halako ny tsy hahagaga ahy amin'ny alàlan'ny feo an-tserasera!), Saingy tena afaka manampy betsaka amin'ny tranokala izany - manome ny maha-izy azy toy ny ataon'ny sary na horonan-tsary. Ho fampahalalana na fitaovana web, ny clip audio dia afaka manome fahefana an'ity tranonkala ity ihany koa.